Drafitra madio, serivisy fanadiovana, vokatra madio- Airwoods
Mifantoka amin'ny vahaolana vaovao an'ny HVAC sy ny vahaolana amin'ny cleanroom izahay
AIRWOODS dia mpamatsy vola manerantany momba ny vokatra azo avy amin'ny angovo, rivotra ary rivotra (HVAC) ary vahaolana feno ny HVAC amin'ny tsena ara-barotra sy indostrialy. Ny fanoloran-tenanay dia ny hanome ny mpanjifanay serivisy avo lenta sy vokatra avo lenta.
Teknisiana efa za-draharaha
Tetikasa feno fanao isan-taona
System consult & fampiharana
Omeo serivisy sy toro-hevitra momba ny consulting, sary mifantina ary sary manao sary mifanaraka amin'ireo tetikasa.
Fametrahana sy vaomiera any ivelany
Ekipa fametrahana Airwoods dia manana traikefa amin'ny fananganana, fametrahana ary fananganana komisiona.
Vahaolana sy fitaovana fampitaovana
Manomeza vahaolana voavolavola amin'ny endrika amam-bika, fividianana, fitaterana, fametrahana, fiofanana ary serivisy fanokanana.
Fiofanana momba ny asa sy serivisy aorian'ny varotra
Manomeza fiofanana matihanina hanampiana ny mpanjifa hitantana tsara kokoa ny rafitr'izy ireo, hampihena ny lesoka ary hanalava ny fotoanan'ny serivisy.
Vahaolana amin'ny indostria
Ny fanoloran-tenanay dia ny hanome ny mpanjifanay serivisy avo lenta sy vokatra avo lenta.
Manomboka amin'ny fanaraha-maso ny fidirana ka hatramin'ny fisorohana an-tsokosoko, manomboka amin'ny fanaraha-maso ny horonantsary ka hatramin'ny fiarovana ny Internet.
Fambolena anaty trano moderina
Miaraka amin'ny teknolojia fanamafisam-peo momba ny rivotra, ny fambolena stereo maoderina tena mahomby dia nanjary malaza noho ny famokarana avo lenta sy maharitra mandritra ny taona, ary tombony ara-toekarena mahasoa.
Ny efitrano fidiovana na efitrano fidiovana dia toerana iray ampiasaina matetika ho ampahany amin'ny famokarana indostrialy na fikarohana ara-tsiansa, ao anatin'izany ny fanamboarana kojakojam-panafody sy microprocessors.
Ho an'ny fanontana fanodinana dingana famokarana volo biolojika (VOC) dia avy amin'ny ranomainty ...
Ny rafitra HVAC dia iray amin'ireo fametrahana fototra lehibe indrindra ao amin'ny trano fisakafoanana / hotely ...
Fitambarana biolojika miovaova
Fitsaboana Airwoods VOC, vahaolana fanaraha-maso sy fanarenana, fandotoana rivotra mampidi-doza ambany ...
Raha ny fanabeazana no resahina, ny ankamaroan'ny fotoana dia manondro ny sekoly misy ny mpianatra ...
Zahao ny ivon-tsary momba ny fampisehoana tetikasa sy loharanom-pahalalana momba ny fanabeazana.
Fanadiovan-drivotra amin'ny fiasan'ny famonoana otrikaretina
Chiller horonan-taratasy vita amin'ny rivotra Modular
CVE Series Permanent Magnet Syndrome mitovy Inverte ...
Varavarana Sandwich Wool Glass
Fitaovana fikirakirana ny rivotra DX naato
Vertical Type Heat Pump Energy Heat Recovery Ve ...
Fitaovana fikirakirana rivotra milamina rano
SISTEM fitsaboana VOC
Hatramin'ny 2007, Airwoods natokana hanome vahaolana feno hvac ho an'ny indostria isan-karazany. Manome vahaolana matihanina madio koa izahay. Miaraka amin'ny mpamorona ao an-trano, injeniera amin'ny fotoana feno ary mpitantana tetikasa natokana ho azy, ...
Ny fahasalamana sy ny fahasambarana an-tapitrisany maro dia miankina amin'ny fahafahan'ny mpanamboatra sy ny mpanamboatra entana mitazona tontolo azo antoka sy tsy misy mangatsiaka mandritra ny famokarana. Izany no mahatonga ny matihanina amin'ity sehatra ity hanana fenitra henjana kokoa noho ny ...
Nahavita tetik'asa 30 mahery tao Mongolia ny Airwoods. Anisan'izany ny magazain'i Nomin State Department, Tuguldur Shopping Center, Hobby International School, Sky Garden Residence ary maro hafa. Nanokana ny fikarohana sy ny teknolojia izahay ...
Ny famonosana sy ny fametahana tsara ilay kaontenera no lakilen'ny fahazoana tsara ny fandefasana azy rehefa mandray amin'ny mpanjifa hafa ny mpanjifanay. Ho an'ireo tetikasan'ny efitrano fanadiovana any Bangladesh, nijanona teo an-toerana ny mpitantana ny tetikasanay Jonny Shi mba hanara-maso sy hanampy ny fizotran'ny entana rehetra. Izy ...